'विदेशबाट फर्किएकालाई क्षमताअनुसार रोजगारी र व्यवसायी व्यवस्था गर्छौं'
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई प्रदेश सरकारले स-सम्मान गाउँघरमा राख्ने र सीप दिने वा सीप भएकालाई रोजगारी दिने योजना बनाउन लागेको बताएका छन् । श्रम रोजगार पत्रकार समूहले गरेको भर्चुवल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले भारतसहित तेश्रो मुलुकबाट प्रदेश २ मा मात्रै करिब १० लाख नेपाली फर्कने अवस्था रहेकोले उनीहरूलाई स्वदेशमा नै कृषितर्फ आकर्षित गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताएका हुन् ।
‘कृषिका लागि ऋण दिने र उत्पादकत्व बढाउने गरी हामीले काम गर्दैछौँ । उनीहरूको घर र खेत बन्धकीमा छ । ऋण तिर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले जो पीडित छन्, उनीहरूलाई रोजगारी र सीप दिनेलगायतका काम गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यस कार्यमा सरकार गम्भीर छ’ उनले भने ‘कोही भारत, कोही अन्य देश जाँदा यहाँ सामान्य खेती भएकाहरू पनि काम गर्न छाडिसकेका छन्, अब विदेशबाट फर्किएपछि कृषिको काम गर्छन्, उत्पादन बढ्ने अवस्था हुन्छु ।' यद्यपि, प्रदेश २ मा मात्रै झण्डै १० लाख मान्छे फर्किने अवस्था रहेकोले तिनको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए ।
संघीय सरकारले नहेरेको गुनासो
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न केन्द्र सरकारले समन्वय नगरेको आरोप लगाएका छन् । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले आफ्नै बलबुतामा कोरोनाविरुद्ध काम गरिरहेको भन्दै केन्द्र सरकारले प्रदेश २ लाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् ।
'हाम्रो प्रदेशका स्थानीय तहलाई सोधिदिनुस् केन्द्र सरकारले के सहयोग गरेको छ ? त्यतिबेला तपाईंले जवाफ पाउनु हुनेछ' उनले भने 'काठमाडौंको मन्त्रालय, मिडिया हाउस र बीआइसीसीमा बसेर भाषण गर्दैमा स्थिति सिध्रिदैन । संघीय सरकारले कोरोना रोकथामका लागि कति बजेट दियो ? कुन कुन पदाधिकारी स्थानीयस्तरमा पुगे ? कुन मन्त्रीले फोन गरे सोध्नुभयो पालिकाहरूलाई ? त्यसकारण अरूलाई निर्देशन दिएर मात्रै हुँदैन, स्थानीयस्तरको अवस्था पनि बुझ्नुपर्छ । उनीहरू पनि फिल्डमा आउनुपर्छ । आवश्यक मात्रामा बजेट पनि दिनुपर्छ ।'
अहिलेसम्म भएका सबै काम प्रदेश र स्थानीय तहकै जोडबलमा भएको मुख्यमन्त्री राउतले दाबी गरे । 'हामीले सेना, प्रहरीसँग मिलेर क्वारेन्टाइन तयार गरेका छौँ, अस्पताललाई प्रदेशले नै बजेट दिएको छ, हरेक स्थानीय तहलाई हामीले नै रकम दिएका छौँ' उनले भने 'केन्द्र सरकारलाई सहयोग माग गर्दै पत्र पठाए पनि बेवास्ता गरिएको छ ।' संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग मिलेर छुट्टै संरचना मार्फत समन्वयमा काम गर्नु पर्ने मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २०, २०७७, १८:००:००